Maitiro ekuisa Kodi paApple TV | IPhone nhau
Maitiro ekuisa Kodi pane Apple TV
Kodi ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa uye anobudirira kwazvo multimedia players yevazhinji-chikuva vashandisi, kwete chete nekuda kwekugona kutamba chero faira fomati asiwo nekuti inobvumidza kuiswa kwemazhinji plugins anoita kuti ive yakasarudzika muchikamu chayo. Yakatemerwa kwenguva yakareba kuenda kuJailbreak uye nekudaro kure neApple TV, kusvika kweiyo yechina-chizvarwa modhi uye mukana wekushandisa Xcode kuisa maficha zviri pamutemo zvinotibvumidza kuti tinakirwe nayo paimba yeTV kubva kuApple chishandiso. Isu tinotsanangura danho nedanho kuti ungazviita sei, uine zvinongedzo kune zvese zvaunoda uye nevhidhiyo izvo hazvisi kuzokusiira usina chokwadi chekuti ungazviita sei.
Iva neakaundi account (yemahara kana yakabhadharwa). Kana iwe usingazive kuzviita sei mukati Iyi link unazvo zvakatsanangurwa.
Xcode ine yakabatana neyekuvandudza account. kurodha pasi kwayo mahara uye unogona kuzviita kubva Iyi link. (inongowanikwa chete paMac OS X)
Iyo Kodi deb faira iwe yaunogona kurodha pasi kubva Iyi link (tinokurudzira yazvino vhezheni)
Iyo yemahara kunyorera "iOS App Signer" iwe yaunogona kurodha pasi kubva Iyi link.
Chizvarwa chechina Apple TV uye tambo yeUSB-C yekubatanidza kune yako Mac komputa.
Unganidza Apple TV yako pakombuta yako uchishandisa tambo yeUS-C
Vhura Xcode uye muFaira> Nyowani menyu sarudza Project
Mukati meTVOS> Menyu yekushandisa tinosarudza sarudzo «Imwe Yekuona Kushanda» uye tinya pane Inotevera bhatani.
Mune iyo "Chigadzirwa Zita" munda tinonyora zita ratiri kuda kupa chirongwa, mune yemuenzaniso "Kodi" wobva wadzvanya pane Inotevera.
Isu tinosarudza nzvimbo kwatinoda kusevha chirongwa (iyo desktop mune iyi muenzaniso) uye tinya paGadzira.
Mukati me "Chikwata" menyu inodonhedza isu tinosarudza account yedu yekuvandudza inosangana neXcode (sezvatakambotaura pakutanga kwechinyorwa) uye tinya pane bhatani re "Gadzirisa Nyaya" muchiitiko chekuti iyo yero katatu inoratidzika kugadzirisa matambudziko angangoitika. ine mamiriro ekupa.
Nechiangle cheyellow chakatonyangarika isu tinoderedza Xcode.
Isu tinovhura iyo application "iOS App Signer" mukati me "Saina Chitupa" uye tarisa kuti yedu yekuvaka account inosanganiswa. Mu «Provisidning Mbiri» tinosarudza iyo inoenderana neyedu «Kodi» chirongwa.
Dzvanya pa "Bhurawuza" uye sarudza iyo "del" faira ratakatora kare. Isu tinobva tadzvanya pa «Vhura» uyezve pa «Kutanga».
Kana tangopedza tinodzokera kuXcode uye mubhawa repamusoro, mu "Window" tinosarudza "Midziyo> Apple TV". Dzvanya pa "+" uye sarudza iyo "ipa" faira ratichangobva kugadzira.
Mushure memaminetsi mashoma iyo Kodi application ichaonekwa pachiratidziro cheApple TV yedu kuti tikwanise nakidzwa neraibhurari yedu yemultimedia uye mapulagini atinoda kuisa. Tichatsanangura maitiro aya mune ramangwana dzidziso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekuisa Kodi pane Apple TV
Maitiro aya anogona kuitirwawo iyo iPad / iPhone? Sekufunga kwangu, kusvikira zvino zvaigona kungoitwa kuburikidza necydia, naJailbreak ...
Izvo zvinogona kuitwa nenzira yakafanana chaizvo asi iwe unoda iyo chaiyo madhidhi yeiyo iPhone kana iPad.
Izvo hazvishande neyakajairika tambo inouya neApple TV?
Kwete, iyo tambo iwe yaunoti Mheni, unoda USB-C iyo isina kuiswa mubhokisi.
M Λ Я IO ♛ (@MarioAparcero) akadaro
unogona here kugadzira dzidziso ye iPhone?
Pindura kuna M Λ Я IO ♛ (@MarioAparcero)
MuIOS app kusaina chitupa changu chekusaina hachioneke, kunyangwe ndichiedza zvakadii, chero rubatsiro? MuXcode zvese zvinoratidzika kunge zvakanaka pasina matambudziko
inoshanda here apple apple 3rd Generation?
Fernando Peralta akadaro
shamwari iyo appigner haitsvage iyo Xcode chirongwa ini ndatevera matanho ese ataurwa
Pindura Fernando Peralta
uye nezve iPhone ???
Izvi zvinoshandira apple tv3?
Ndakaisa Kodi pane yangu Apple TV 4 svondo rapfuura uye ikozvino ini ndinopinda zvakajairika sezvo zuva rega rega ini ndinodzvanya paKo uye ndinowana kuti haiwanikwe, haivhure asi ndine chiratidzo, vanogona kundibatsira zvinogona kuva . Ndatenda.
Zvinoitika kwandiri zvakafanana naJuan Carlos, ndanga ndichishandisa KODI neMAME kwemavhiki akati wandei uye pakarepo ndichiyedza kuwana maficha meseji inoratidza ichiti "Haisipo". Chero zano rekuti ungarigadzirisa sei? Ini ndichaedza kudzoreredza asi nhungamiro yaizokosheswa kana iwe uchiziva kuti nei izvi zvichiitika. Ndatenda
Dambudziko nderekuti chitupa chinopera mushure mechinguva, mhinduro ndeyekuchidzorera pane Kodi tv.
Iko hakuna sarudzo asi kumirira kuti jailbreak ive yakagadzikana inoonekwa zvinoonekwa, nekuti mazuva ese manomwe achiisa ...
Mhoroi, nyaya yangu inoita kunge Juan Carlos, iyo icon icon inoonekwa muapptv4 asi pandinodzvanya icon yacho inoti kodi haiwanikwe. Ichokwadi kuti chakandishandira kumba, asi ndakaisiira kushamwari, uye vanowana iwo meseji isingawanikwe. Zvingave zvichikonzerwa nesiginecha yesitifiketi yakariisa sekutaura kwaGlez?
Dr'La Burra T akadaro
Mhoro, chero gadziriso kune ino positi, iyo DEB faira haichaonekwi muligi
Pindura Dr'La Burra T
Iyo iPad Air 3 inogona kunge iine maspika mana uye kupenya kwemifananidzo